Maxay tahay sababta looga gaabsado dilalka khaarijinta ah ee ay fuliso Kuuriyada Waqooyi? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka EPA/YONHAP
Guud ahaan warbaahinta caalamka ayaa ku warramaysa in Xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ay khaarijisay ergaygeedii u qaabilsanaa wada xaajoodyada hubka nuclear-ka, arrintaas oo qayb ka ah khaarijinta lagu hayo saraakiishii ka qayb gashay shir madaxeedkii fashilmay ee dhex maray Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi.
Tanaasulaadkiisa diblumaasiyaadeed ee uu u sameeyey Maraykanka ayaa guuldarraystay kuna dhammaaday natiijo la'aan, arrintaas oo ku keentay in cadaadis uu fuulo.
Kim Jong-un ayaa horay u fuliyey dilal khaarijin ah. Sanadkii 2013, Mr Kim adeerkiis oo ahaa nin aad u awood badan laguna magacaabi jiray, Jang Song-thaek, ayaa la khaarijiyey asagoo lagu eedeeyey khayaano qaran. Hay'adaha sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ku dhawaaqay geeridiisa maalmo uun kahor inta aanay ku dhawaaqin Kuuriyada Waqooyi.
Hay'adaha sirdoonka ee Seoul iyo Maraykanka ayaa isku dayaya in ay ogaadaan halka uu ku dambeeyey Kim Hyok-chol, oo haatan la la'yahay meel uu jaan iyo cirib dhigay, balse haddii aanay xukuumadda Pyongyang sheegin halka uu ku dambeeyey, way adag tahay in la ogaado.